पहिलो महिला मेकप आर्टिस्टको अनुभव : लगनशील भए सान,मान र धन,देखावटी गरे पलायन - Ankuran Khabar
पहिलो महिला मेकप आर्टिस्टको अनुभव : लगनशील भए सान,मान र धन,देखावटी गरे पलायन
२०७७ माघ ९0
चाहे फिल्म होस् चाहे मियुजिक भिडियो वा सुन्दरता सम्वन्धि काम गर्ने अब्बल व्यक्तिको रुपमा परिचित नाम हो सुशिला जोशी । करिब २१ वर्ष अघिदेखि निरन्तर मेकप आर्टिस्टको रुपमा कार्यरत सुशिला नेपालको सन्दर्भमा पहिलो महिला मेकअप आर्टिस पनि हुन् ।
नाम जस्तै काममा पोक्त सुशिला मेकअपको लागि नेपालका चर्चित होरो हिरोइनदेखि मोडलको रोजाइमा पर्छिन् । करिब डेड दशक अघिको सेरोफेरोमा मेकप आर्टिस्टको रुपमा एक छत्र राज गरेकी उनै सुशिला जोशीसंग अंकुरण खबरको टिमले त्यस समयदेखि वर्तमानसम्म मेकप आर्टिसको भूमिका, अवस्था, चुनौती र संभावनाका बारेमा गरेको कुराकानी…
तपाईलाई त्यस समयमा मेकप आर्टिस्ट बन्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो ?
मैले सानैदेखि केही नयाँ काम गर्छु भन्ने सोचेकी थिए । त्यसै शिलशिलामा जव विद्यालय तहको पढाई सकियो त्यस पछि मेरो दिदी(फुपु) फिलिम क्षेत्रमा निकट रहेकाले उहाँकै सुझाव र प्रेरणामा मेकप आर्टिस्ट तिर लागे । आज भन्दा २१ वर्ष अघि सुरुमा मैले एक वर्ष हेयर ड्रेसरको काम गरे त्यस पछि मेकप आर्टिस्ट सुरु गरेकी हुँ ।
तपाईले मेकप आर्टिस्टको काम सुरु गर्दा के-कस्ता समस्याको सामना गर्नुप¥यो ?
ओहो(हासो…) त्यी दिन सम्झदा पनि अहिले कसरी पार गरेहोला भनेर अत्यास लाग्छ । हाम्रो समाजमा अहिले त छोरी चेलीलाई श्रृंगारको क्षेत्रमा राम्रो नमान्ने छन् भने त्यस बेला त मैले रोजेको काम घरपरिवार र समाजको लागि ठुलै तगारो थियो । मेरो बारेमा कुरा काट्ने त कति हुन कति । तर त्यसको मैले कुनै प्रवाह गरिन किनकी मैले नराम्रो गरेकै थिइन् । मेकप आर्टिस्ट भएकै कारण सुरुसुरुमा त कति आफ्न्तसंगको सम्वन्धमा दरार पैदा भयो । त्यो विषम चुनौतीको सामना गर्दै निरन्तर काममा लागिपरिरहेका कारण म नेपालको पहिलो महिला मेकप आर्टिस्ट भनेर परिचय बनाई यो स्थानमा छु ।
पहिले र अहिले मेकअप आर्टिस्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु हन्छ ?
त्यो त आकाश जमीनको फरक छ । २०–२१ वर्ष अगाडी त्यस माथि मेरो त अझ नेवारी समाज छोरी चेली घरकै काममा रमाउनु पर्छ कि त पढेर सम्मानको जागिर खानु पर्छ भन्ने सोच थियो अधिकांशको । म भन्दा पहिला कुनै महिलाले यस्तो काम नै गर्नुभएको थिएन् । फिलिम सुटिङका क्रममा नायक,नायीकाहरुको श्रृृगारको लागि हप्तौ बाहिर पनि जानु पर्ने हुन्थो । त्यही भएर त्यस समय केटाहरुले मात्र यो काम गर्नुहुन्थो । छोरी मान्छे जादा आफ्नो मात्र नभएर परिवारकै सम्मानमा आच आउँथो ।
तर समय वित्दै जाँदा विस्तारै यो कुरामा परिवर्तन आएको छ । अहिले धेरै संख्यामा मेकप आर्टिस्टको रुपमा काम गरिरहेका छन् छोरीहरु । लिंगको आधारमा भन्दा पनि कामको आधारमा सम्मान पाइने भएको छ अहिले । यो निकै सकारात्मक कुरा हो ।
मेकप आर्टिस्टहरु यो पेशामा लामो समय नटिक्नुको कारण के होला ?
निरन्तरता नहुनु हाम्रो पेशाको ठुलो समस्या हो । सबै भन्दा पहिला त यो क्षेत्रमा आउने व्यक्तिले बुझ्नु प¥योकी यो पेशा बाहिर हेरे जतिको सहज पट्क्कै छैन् । यो निकै संवेदनशील पेशा हो । अरुको शरीरसंग प्रतक्ष्य जोडिएको विषय भएकाले पनि हरेक कुरामा ध्यान दिएर काम गर्नु छ । थ्रेडिन गर्दा होस या मेकप गर्दा सानो लाप्रवाही भयो भने दीर्घकालसम्म अस्वस्थ बनाउन पनि सक्छ । त्यस माथि लाखौ लगानी गरेर निर्माण गरेका फिलिम होस् या म्युुजिक भिडियो या विज्ञापनका पात्रलाई कथाले माने अनुसारको रुप निर्माण गर्न सही मेकपको खाचो हुन्छ । कस्लाई कस्तो आवश्यक छ सो छान्न सक्ने क्षमता हामी मेकप आर्टिस्टमा हुन जरुरी छ ।
अर्को कुरा कतिपयको सोचाई हुन्छकी यो पेशामा त थोरै लगानीले धेरै कमाउन सकिन्छ । त्यसो हैन्, कमाउन नसकिने भन्ने हैन् तर आवश्यक्ता भन्दा बढी सोचेर आएका व्यक्तिहरु बिचमै पलाएन भएका उदाहरण धेरै छन् ।
यो पेशामा कत्तिको दाम र नाम कमाइन्छ ?
दाम र नामको कुरा स्वयं मेकप आर्टिस्टमा भर पर्ने कुरा हो । जो काममा लगनशील, दक्ष छ, जसको काम राम्रो छ, आफुले काममा प्रयोग गर्ने सामग्रीको गुणस्तरमा ध्यान दिन्छ,मिलनसार स्वभावको छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सहजै समाल्न सक्छ त्यो मानिसनै यो क्षेत्रमा धेरैको रोजाईमा पर्छ । जति बढी काम उती बढी दाम त हुनेनै भैगयो । मिहिनेत गर्नेलाई सन्तोषजनकै छ । मेरै कुरा गर्दा पनि यहि पेशाबाट नै मैले धेरै ठाउँमा घुम्ने अवसर पाए । केही टेलिश्रीयलहरुमा पनि खेलेकी छु । दर्शकको प्रतिक्रिया राम्रो छ ।
सायद नेपालका चर्चित सिने कलाकालहरु प्रायः सबैलाई मेकप गरिदिनु भएको छ उहाँहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु हुन्छ, कस्तो अनुभव छ ?
मैले अधिकांश चर्चित नायक नायीकादेखि मोलडहरुको मेकप गरेकी छु । महानायक राजेश हमाल, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिबंश आर्चाय करिष्मा मानन्धर,निर शाह, सुनिल थापा, भुवन केसी,रेखा थापा,मेलिना मानन्धर,नीखिल उप्रेती,गौरी मल्ल,संचिता लुईटेल,दिपाश्री निरौला, दिपकराज गिरी,सिताराम कट्टेल,कुञ्जना घिमिरे,श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रियांका कार्की, पुजा शर्मा,स्वस्तीमा खड्का लगाएतका नयाँ पुराना हजारौ कलाकारलाई मेकप गरिदिएकी छु । उहाँहरुले राम्रो काम भनेर प्रशंसा गर्दा धेरै सन्तुष्टि मिल्छ । उहाँहरु सुटिङ नहुँदा पनि आवश्यक पर्दा मेरो पुरानो बानेश्वरमा सञ्चालित सुशिला व्युटि टच नामक व्युटिपार्लरमा आउनु हुन्छ । मेरो यस पारर्लरमा मेकप आर्टिस्ट हुन इच्छुक व्यक्तिलाई तालिमको व्यवस्था पनि छ ।
मेकप आर्टिस्टको नेपालमा भाविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
जुन सुकै पेशामा पनि लामो समय टिकी रहन सबै भन्दा पहिले त आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ मेकप आर्टिस्टको क्षेत्रमा पनि त्यही कुरा हो । समय अनुकुल गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गर्दै लगे मेकप आर्टिस्टको भविष्य राम्रो छ । अरुको देखेर नबुझिकन लागे निरन्तरता दिन गाह्रो हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश, माघ १९ मा छलफल हुने
आफैंले बनाएको प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमविरुद्ध सडकमा आउनुपर्दा लज्जाबोध भएको छ : भुसाल